Slack 19.09.20.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 19.09.20.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Application မ်ား စီးပြားေရး Slack
Slack ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်ပိုမိုအလုပ်အမှုကိုပြုရနိုင်အောင်လျှော့သင်တစ်ဦးကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဖြစ်စေ, တဦးတည်းအရပျသို့အဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်တတ်၏။ သင့်ရဲ့ To-do list ကိုပယ် Check နှငျ့သငျအတူတူလိုအပ်ပါတယ်ျာလူမျိုး, စကားဝိုင်း, ကိရိယာများ, နှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ရှေ့ဆက်သင့်ရဲ့စီမံကိန်းများကိုရွှေ့။ လျှော့မဆိုစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင်စားပွဲခုံမှာသို့မဟုတ်သွားလာရင်းပေါ်မှာဆိုရင်ဖြစ်စေ, သင့်အဖွဲ့သည်နှင့်သင်၏အလုပ်ရှာပြီးဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
•သင့်အဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်နှင့်အကြောင်းအရာများ, စီမံကိန်းများ, သို့မဟုတ်သင့်အလုပ်အဖို့အရေးပါသည်ကိုအရာအားလုံးထက်အားဖြင့်သင့်စကားပြောဆိုချက်တွေကိုစုစည်းပြီး
•သင့်အဖွဲ့သည်အတွင်းမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို Message သို့မဟုတ်မခေါ်
•သင်၏လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့သင်ပြီးသားကို Google Drive, Salesforce Dropbox, Asana ဟာ, Twitter Zendesk နှင့်ထို့ထက် ပို. အပါအဝင်သုံးကိရိယာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေါင်းစပ်
သင့်ရဲ့အလုပ်လုပ်အသက်, ရိုးရှင်းတဲ့ပိုပြီးသာယာသောနှင့်ထို့ထက် ပို. အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြ (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကောလဟာလသတင်းများအရ) ။ ငါတို့သည်သင်တို့လျှော့တစ်ဦးပါပေးပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Slack အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Slack အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Slack အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Slack အား အခ်က္ျပပါ
d0ss စတိုး 32.72k 6.77M
Slack ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Slack အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 19.09.20.0
ထုတ်လုပ်သူ Tiny Speck
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://slack.com/privacy-policy
App Name: Slack
Release date: 2019-09-21 00:14:36
လက်မှတ် SHA1: 3B:33:D9:24:DA:1A:60:CF:41:10:AA:93:6D:28:5B:B1:26:C8:1F:F5
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Tiny Speck
အဖွဲ့အစည်း (O): Tiny Speck Inc
နိုင်ငံ (C): 94103
Slack APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ